दाङमा ऐतिहासिक ‘भोटे मेला’ शुरु - नेपालबहस
दाङमा ऐतिहासिक ‘भोटे मेला’ शुरु
| १५:१९:५७ मा प्रकाशित
२७ फागुन, तुलसीपुर । यहाँको ऐतिहासिक ‘भोटे मेला(शिवरात्रि)’ आजदेखि शुरु भएको छ । जुम्ला, हुम्ला, मुगुलगायतबाट यार्सागुम्बा, जडीबुटी, राडी, कम्बल बेच्न आएका भोटेहरूले दाङको तुलसीपुरमा भोटे मेला लगाउने गरेको इतिहास छ । पछिल्लो समय विसं २०६१ देखि बन्द रहेको यो मेला गत वर्षदेखि दाङबासीले नै चासोका साथ पुनः सञ्चालन गरेका हुन् । ऐतिहासिक मेलालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले मेला लगाउन शुरु गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य दीपक कुमालले बताए।
उहाँका अनुसार मेला चैत २ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । उक्त मेलाको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरीले मेला ऐतिहासिक भएकाले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार यस मेलाको विशेषता नै घोडा दौड हो, यस प्रतियोगितालाई राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्छ । मेलालाई परिस्कृत गरेर थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख माया आचार्यले उपमहानगरपालिकाभित्रका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको संरक्षण गरिएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यस मेलालाई ऐतिहासिक झल्किने गरी मेलालाई निरन्तरता दिने बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ स्थित पर्सेनीमा उक्त मेला लाग्ने गरेको छ ।
वडाध्यक्ष टोपबहादुर केसीका अनुसार पहिले सार्वजनिक जग्गामा मेला लगाइने गरिएको भए पनि त्यो जग्गा अतिक्रमणमा परेकाले खोलामा मेला लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । उनले नजिकै शवदाहस्थल तथा विद्यालय जाने बाटोसमेत भएकाले अन्य स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । सार्वजनिक जग्गामा संरचनासमेत बनेकाले अन्य स्थानमा मेलाका लागि ठाउँ खोजी भइरहेको उनले बताए। मेलामा घोडा दौड प्रतियोगितासमेत गराइएको थियो । छ दिनसम्म चल्ने मेलामा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति रहनेछन् । मेलामा १३० स्टल राख्नुका साथै बालउद्यान, मौतकी कुवा, पिङलगायत मनोरञ्जनका सामग्रीसमेत राखिएको छ । साथै स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन, स्थानीय लोक संस्कृति संरक्षण, देउडा नाचलगायत प्रस्तुत गरिनेछ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ कार्यालयको संरक्षकत्वमा तुलसीपुर एक्सप्रेस प्रालिले मेलाको आयोजना गरेको हो भने सहआयोजकमा रानीघाट युवा क्लब रहेको छ ।
धेरै वर्ष पहिलादेखि भोटेहरू हिमालबाट घोडा चढेर फागुनमा दाङ आइपुग्थे । उनीहरूले ल्याएका जडीबुटी, यार्सागुम्बा, कम्बल, राडीलगायत स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्ने गर्थे । उनीहरू रात परेपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ स्थित पर्सेनीमा बस बस्थे । त्यही बास बसेको ठाउँ उनीहरूले आफ्ना संस्कृति झल्किने नाचगान प्रस्तुत गर्थे । जुन दिन शिवरात्रि पथ्र्यो । त्यही दिन घोडा दौड प्रतियोगितासमेत राखे । त्यही घोडा दौड प्रतियोगिता हेर्न धेरै मान्छे जम्मा हुन्थे । त्यसपछि त्यो ठूलो मेलाका रुपमा परिणत भयो ।
त्यसपछि प्रत्येक शिवरात्रिका दिन मेला लाग्ने गथ्र्यो । भोटेहरूले हिमालबाट ल्याएका सामग्रीसमेत बिक्री हुने गरेको तुलसीपुर–७ निवासी ८७ वर्षीय दोर्णबहादुर केसीले बताए । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विसं २०५४ देखि भोटेहरू दाङ आउन छाडे । तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच चर्किएको द्वन्द्वका कारण भोटेहरू आउन छाडे पनि स्थानीयवासीले मेला लगाए । मेलामा स्थानीय संस्कृति झल्किने नाचगान गरिन्थ्यो । जिल्लाका विभिन्न ठाउँका मानिस स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्न मेलामा आउँथे तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ पर्सेनी निवासी ७६ वर्षीय खुमानन्द अधिकारीका अनुसार विसं २०६१ देखि मेला पूर्णरूपमा बन्द भयो ।
स्थानीय युवाबीच मेला लगाउने विषयले उग्ररुप लिएर झडपसमेत भएको थियो । तत्कालीन हलवार गाविसले मेला लगाउन प्रतिबन्ध गरेपछि १५ वर्षसम्म मेला लाग्न सकेको थिएन । गएको वर्षदेखि पुनः मेला लाग्न शुरु भएको छ । भोटेहरूले लगाउँदै आएको मेलामा पछिल्लो समय दङ्गालीहरूको पनि चासो बढेको देखिन्छ । कला संस्कृतिको संरक्षण तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले मेलालाई निरन्तरता दिन लागिएको हो ।
के तपाई शिवरात्रिका दिन काम विशेषले घर बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ ? १ महिना पहिले
परम्परागतरुपमा नृत्य गर्दै आएको सांस्कृतिक बालन नाच हिजोआज संकटमा ३ महिना पहिले
प्रदेश प्रमुख कलौनीद्वारा २२९औँ पृथ्वीजयन्तीको शुभकामना ३ महिना पहिले
काष्ठमण्डप पुनः निर्माण ८५ प्रतिशत सम्पन्न, अब छानो छाउने तयारी ३ महिना पहिले
प्राचीन शैलीमा चरिघ्याङ गुम्बा पुनःनिर्माण ३ महिना पहिले
त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिज : नेदरल्याण्डस्द्वारा मलेशिया पराजित ५ मिनेट पहिले
केसीको निधनले डा. शेखर दुःखी २२ घण्टा पहिले
किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा ३४ वर्षीय पुरूष पक्राउ ३ दिन पहिले
ज्यानमारा भाइरसबाट बाँकेमा एक पुरुषको मृत्यु ३ दिन पहिले
विष्णु पाण्डे पार्कमा शहीद सङ्ग्रहालय स्थापना हुने २ दिन पहिले
बम विष्फोट घटनामा संलग्न फरार प्रतिवादी पक्राउ ७ दिन पहिले
एकै वर्षमा पाँचवटा सिँचाइ आयोजना निर्माण १ हप्ता पहिले
इजरेलको चुनावमा आफ्नो ‘ठूलो जित’ हुने नेतान्याहुको दाबी ४ हप्ता पहिले
गण्डकीमा माओवादीका दुई मन्त्रीले बुझाए राजीनामा २ हप्ता पहिले
कर्णालीमा ६ महिने बालकसहित ५५ जनामा कोरोनाको पुष्टि १० महिना पहिले
बाजुरामा भाइरल ज्वरोले एकको मृत्यु २ वर्ष पहिले
नेपाल विशेष सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयकमा ध्यानाकर्षण १ वर्ष पहिले
जनप्रतिनिधिहरु मैमत्ता साँढे झैः प्रेस युनियन १० महिना पहिले